ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကစားသမားများ က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးကာကွယ်ရေး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; ''အထွေထွေ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိအဖြစ်မှန်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များသင်အပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိခုခံကာကွယ်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သည့်က Nicolas Otamendi ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Nicolas Hernánဂွန်ဇာ Otamendi Buenos Aires, အာဂျင်တီးနားအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 12 ၏ 1988th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူဟာမွေးခြင်းဖြင့်ကုံဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအာဂျင်တီးနားမိဘများက Mr နှင့် Mrs Hernan Otamendi မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
က Nicolas အယ်လ် Talar, Buenos Aires, အာဂျင်တီးနားအတွက်သေးငယ်တဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူကကလေးတစ်ဦးအဖြစ် Multi-ပါရမီဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Otamendi သည်သူ၏လူငယ်ဘောလုံးနှင့်လက်ဝှေ့အကြားသူ့အချိန်ခွဲ။ ကြီးပြင်းသူဘောလုံး၏လှပသောဂိမ်းအားလုံးသည်သူ၏စွမ်းအင်မွှုပျနှံဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီကသူ၏ဝမ်းကွဲနှင့်အတူဒေသခံတစ်ဦးအားကစားရုံ၌သူ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတည်ဆောက်ခြင်း, လက်ဝှေ့နှင့်ဘောလုံးကွင်းအကြားသူ့အချိန် shared ။
က Nicolas ကသူ၏ဒေသခံအာဂျင်တီးနားကလပ်, Velez Sarsfield မှာမိမိဘောလုံးဘဝစတင်ခဲ့သည်။ သူကလူငယ်နှင့်အကြီးတန်းအဖွဲ့များ၎င်းတို့၏အရောင်များကိုဝတ်ဆင် 12 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအိမ်မှာရှင်းလင်းစွာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ သူကပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်ပုံမှန်အရပျကိုခိုင်မြဲတောင်မှအခါ, က Nicolas နေဆဲသည်သူ၏အဖေနှင့်အမေနှင့်အတူအိမ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှထလော့
တောင်အာဖရိကရှိ 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာအထင်ကြီးစရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက်သူအဲဒီနှစ်သြဂုတ်လအတွင်းကပေါ်တိုအားဖြင့်ဖွင့်ရိုက်ယူခဲ့သည်ခဲ့သည်။ အောင်မြင်တဲ့နှစ်ခုရာသီပြီးနောက်ယူရိုပါလိဂ်နှင့်ပေါ်တူဂီဆုဖလားဆွတ်ခူး, ဗလင်စီယာ Otamendi များအတွက်€ 12m ပေးဆောင်။ စပိန်ကလပ်ချယ်လ်ဆီး, ဘာစီလိုနာနှင့်အေစီမီလန်ကနေအတိုးချွတ်စစ်တိုက်ကြ၏။ က Man City, Otamendi တခါလေ့ကျင့်သို့မဟုတ်ဗလင်စီယာနှင့်အတူဆော့ကစားရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါအခွင့်အလမ်းကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ကအပေါ်ပုတ်နှင့်£ 28.5 သန်းများအတွက်အထွေထွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
က Nicolas Otamendi သည်သူ၏အာဂျင်တီးနားကလေးဘဝရည်းစားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာတစ်ချိန်ကသူ့ဇနီးမြို့လယ်မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်ဦးတည်နှင့်အတူပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူကအောက်ကဓာတ်ပုံလည်းပျော်ရွှင်မကြည့်ပါဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဂွာဒီယိုလာ အရေးပါသောဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုထွက်ထားခဲ့တယ်။
က Nicolas Otamendi လည်းသူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထားရှိမည်လျက်ရှိသည်အခြားကလေးများရှိသည်ဖို့လူသိများသည်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -စစ်တပ်စတိုင်
က Nicolas Otamendi ရဲ့အမည်ပြောင်တကယ်တော့
ထို့အပြင်သူသည်အယ်လ် Mohicano အဖြစ်လူသိများပါတယ်။ ဤသည်အမည်ပြောင်ကသူ့မုတ်ဆိတ်မှပြောပြတယ်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါမုတ်ဆိတ်
က Nicolas ဟာမုတ်ဆိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တိုက်ရာတွင်ထိပ်၌လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအာဂျင်တီးနားတစ်ကြိမ်သည်သူ၏မုတ်ဆိတ်ကသူ့ရန်လို, ခက်ခဲတဲ့-ကောင်လေး image ကိုအထောက်အကူပြုကူညီပေးသည်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
သူကမမှားပေမယ့်ဒါဟာအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကသူ၏ခေတ်ပြိုင်ဆံပင်နှင့်အတူဒွန်တွဲထားတဲ့, မိမိမျက်နှာဆံပင်သပ်ရပ်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ပုံဖော်သို့ဝင်ရှင်းပါတယ်, နေရာထဲကရှာဖွေနေသူ့ကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါမုတ်ဆိတ်၏က Nicolas Otamendi- ရှငျဘုရငျ
သူ၏စကားအတွက် ..''ငါမုတ်ဆိတ်ဗလင်စီယာမှာကြီးထွားစေစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကိုယ့်ကြောင့်ကြိုက်တယ်, ဒါပြီးရင်ကတည်းကငါ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ "
အမှန်စင်စစ်, သူ့ကြမ်းတမ်းရူပသတ်မှတ်ပါတယ်ရာ Otamendi ရဲ့မုတ်ဆိတ်ကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အများအပြားအောင်မြင်သော ယူ. မှဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုင်တွယ်အောင်မြင်တဲ့တခုရဲ့ဥပမာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မိမိအ beardy သူ့ကို ယူ. အနိုင်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါ Tattoo
က Nicolas Otamendi Tattoo အချက်အလက်
သူ 14 အခါ Otamendi သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတက်တူးထိုးခဲ့ရသည်။ ယနေ့သူက၎င်း၏အရေးပါမှုရှိခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း, များစွာသောရှိပါတယ်။ သူ၏စကားမှာတော့ "ကျနော့်အစ်ကိုနှင့်မီတာy ကကလေးတွေ, အကြှနျုပျ၏အဘ, ငါ့မိခင်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, ငါ့အဘိုး၏မျက်နှာကိုငါ့ကိုယ်ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်. မကုန်မှီတိုင်အောင် dစားခဲ့, ငါလိုလျှင် seငါ့မျက်မှောက်ဖမ်းမိထားတဲ့ ea ဒီဇိုင်း, ကိုယ်ကသွားပါလိမ့်မယ်။ "
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါအာဂျင်တီးနား Factor
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုမှ Otamendi ရဲ့ထို့အပြင်အာဂျင်တီးနားတစ်ချိန်ကစီးတီးအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်မှတ်ယူခံရဖို့တယ်ဆိုလိုသညျ။
အဆိုပါစင်တာ-ပြန် Etihad တစ်သင်းလုံးကကစားသမားခန်းထဲမှာမိမိနေရာမှယူဆဌမအာဂျင်တီးနားဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူဟာတစ်ချိန်ကမိမိအ compatriot ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုးသည်မန်ချက်စတာများအတွက်ဗလင်စီယာဖလှယ်ဖို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအတွက်အဓိကအချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူဟာထင်ရှား: "ကျွန်မနေတဲ့အချို့သော Copa အမေရိကတိုက်ကာလအတွင်းအဂွဲရိုးသည်အတူစကားပြောအခြိနျကတည်းကစီးတီးအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုအမြဲတစ်ဆွဲဆောင်မှုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ "
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါမွေးနေအိမ်ထောင်ဖက်
Otamendi ချားလ်စ်ဒါဝင်နှင့်လင်ကွန်းအပါအဝင်အတိတ်ထဲကနေတချို့ Illustrious ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူမိမိအမွေးနေ့ကိုဝေမျှပေးသည်။ မကြာသေးမီကသရုပ်ဆောင်များကိုယေရှဲ Spencer နှင့် Josh Brolin လည်းက Nicolas ကဲ့သို့တူညီသောနေ့၌သူတို့ဖယောင်းတိုင်ကိုထုတ်မှုတ်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါမှတ်တမ်းလုယူသောသူ
Otamendi တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲစံချိန်တင်လုယူသောသူသည်။ ပြီးတာနဲ့အချိန်အပျေါမှာ, Real Madrid အသင်း 22 မှာမတ်တပ်ရပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စံချိန်, ခံစားခဲ့လာလီဂါဘီလူးကြီးအထွေထွေ, က Nicolas Otamendi ဆန့်ကျင်တက် လာ. သည်အထိတစ်တန်းအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် စီရော်နယ်ဒို အဆိုပါအမှတ်ပေးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့်ဗလင်စီယာများကိုညီမျှစေရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျင်းပလျက်နှင့်မကွာမွငျ့စှာ halftime ပြီးနောက်, 6ft အထွေထွေပါဝါအိမ်မှာကသူ့ခေါင်းစဉ်ပန်းတိုင်လေထုထဲသို့မြင့်မားသောခုန်ထွက်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
က Nicolas Otamendi သည်မိမိအဘအားဖြင့် operated တစ်လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မိသားစုနောက်ခံအဆင့်အတန်းကိုချွတ်ပေးဆောင်ဘောလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဖြစ်တိုးမြှင်တယ်။
သူ့မိဘက Mr နှင့် Mrs Hernan Otamendi နှစ်ယောက်စလုံးအာဂျင်တီးနားမြို့တော် Buenos Aires ရှိနေထိုင်နေကြရသည်။ က Nicolas Otamendi သူ၏မိခင်ရန်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်သတင်းပို့သည်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိမိအ Idol
က Nicolas Otamandi ရဲ့ရုပ်တုကိုထက်မကအခြားလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရောဘတ် Ayala.
Otamendi 2010 အတွက်အာဂျင်တီးနားရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမားကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအခါ, ပထမဦးဆုံး compatriot နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သိမ်းသွင်း ထား. စတင် ရောဘတ် Ayala, အဘယ်သူသည်, La Albiceleste အဘို့ပွဲတစ်ရာစုကျော်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါဒဏ္ဍာရီနောက်ခံလူ (Ayala) 2000 နှင့် 2007 အကြားဗလင်စီယာမှာခုနစ်နှစ်နေခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ 2014 အတွက်ကလပ် join ရန်သူ၏ငယ်ရွယ်တပည့် (Nicolas Otamendi) စည်းရုံးကူညီနေသူတဦးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -compression က Man
က Nicolas Otamendi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်
က Nicolas Otamendi မွေးခြင်းဖြင့်ကုံဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွဲအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
က Nicolas Otamendi ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ: သူသည်တိုးတက်သောမူရင်း, လွတ်လပ်သောနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဖြစ်ပါတယ်။
က Nicolas Otamendi ရဲ့အားနည်းချက်များ: စိတ်ခံစားမှုစကားရပ်, ဒေါသ, အလျှော့နှင့်စေသောထံမှပြေး။
အဘယျသို့က Nicolas Otamendi likes: အကြောင်းတရားများများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အခြားသူများကိုကူညီပေးနေသူငယ်ချင်း, ဉာဏစကားပြောဆိုမှု, ကောင်းတစ်ဦးနားထောင်တတ်သူနှင့်အတူပျော်စရာ
က Nicolas Otamendi နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: ကန့်သတ်, ကျိုးကတိတော်များ, အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်း, မှိုင်းသို့မဟုတ်ပျင်းစရာအခြေအနေများ, သူတို့နှင့်အတူသဘောမတူသူတွေကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က Nicolas Otamendi ရဲ့ငယ်ဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!